‘पानीजहाज आउछ, टिकट काट्न पनि पाइन्छ केही समय धैर्य गर्नुहोस्’ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
‘पानीजहाज आउछ, टिकट काट्न पनि पाइन्छ केही समय धैर्य गर्नुहोस्’
प्रकाशित मिति: २२ पुष २०७५, आईतवार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयभित्रै पानीजहाज आउने बताउनु भएको छ । संसदलाई सम्वोधन गर्दै उहाले केही समय अझै पर्खिन भन्दै नेपालबाटै पानीजहाज चल्ने र टिकट काट्न पाइने बताउनु भएको हो ।
‘केही वर्ष पहिले मैले पानी जहाज आउछ भन्दा बाल्टिमा कागजका जहाज कुदाउनेहरु अहिले टिकट खोज्न थालेका छन्,’उहाले अगाडी भन्नुभयो,‘कम्तीमा टिकट त खोज्न थाल्नु भएको छ । केही समय धैर्य गर्नुहोस्, पानी जहाज पनि आउछ, टिकट काट्न पनि पाइन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले जे गर्दा पनि प्रश्न उठाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘अहिले म केही अनौठो व्यवहारको अनुभूति गर्दैछु । प्रश्न उठ्यो– ‘सरकार के गर्दैछ, पत्तो भएन !’ के गर्दै छ भन्ने जवाफ दिन्छु अनि फेरि प्रतिप्रश्न आउँछ– ‘प्रधानमन्त्री किन बोलेको १ बोल्न नहुने रहेछ भनेर चुप रहन्छु, फेरि प्रश्न उठ्छ– खोई जवाफ दिएको ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘केही गर्न खोजिन्छ, सोधिन्छ– यो किन गरेको रु केही नगर्दा त प्रश्न उठ्ने नै भयो– खोइ काम गरेको ?
राज्यलाई समृद्ध बनाउने र जनता सुखी बनाउने भन्दा आफ्नो अर्को स्वार्थ नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । ‘मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुचि छैन । गर्नु पनि छैन । गर्नु छ त मुलुकको विकास । अब पनि विकास नगर्ने हो भने कहिले गर्ने रु हामीले पनि नगर्ने हो भने कसले गर्ने रु’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
१४ महिनापछि नेकपाले पायो पुर्णता : कार्यबिभाजनदेखि बिभाग गठनसम्म भयो यस्तो सहमति
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकताले पुर्णता पाएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र […]
हिलोमाथि रातो कार्पेटको जात्राः प्रधानमन्त्रीको समृद्धि यात्रा ! बेथितिको पराकाष्ठा छर्लङ्गै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६० औँ वार्षिक दिवसका अवसरमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री केपी […]
नजिकिँदै कांग्रेस-राजपा,सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी तयारी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारविरुद्ध […]
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्दै
काठमाडौं । सरकारले उच्च महत्व दिएर करिब दुई दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गरी […]
प्रहरी र विप्लब कार्यक्रताबीच भिडन्त: सँगै चियापान, अनि गोली हानाहान
काठमाडौं । सदरमुकाम मुख्य बजारको पश्चिमतिर रहेको पान्धारे नामको होटलमा बुधबार बिहान सादा पोसाकका प्रहरी र […]
तरकारीमा विषादी परीक्षण प्रकरण : प्रधानमन्त्री ओलीले किन ढाँटे ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी परीक्षण रोक्न भारतको दबाब नआएको दाबी गरेको ठीक एक साताअघि […]
शहीद गेटमा शक्तिशाली बम विष्फोट,५ जना घाइते,एक जना गम्भिर
भगवान बिष्णु किन सुत्नुहुन्छ सर्पको ओछ्यानमा ? यस्तो छ कारण
एनिमेसन स्टुडियोमा आगजनी, २४ जनाको मृत्यु
अन्तरिक्ष केन्द्रबाट तीन अन्तरिक्षयात्री सकुशल पृथ्वीमा फिर्ता
सरकारको पछिल्लो वर्ष : जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने १८७ क्षेत्रमा देखिए यस्ता उत्कृष्ठ काम